Hiran State - News: Maxaad kala socotaa qaabka lagu dilo dadka hantidooda looga dhacay Mogdisho sida gur iyo wax la mid ah.
Maxaad kala socotaa qaabka lagu dilo dadka hantidooda looga dhacay Mogdisho sida gur iyo wax la mid ah.
HS:-Madaax kala socotaa qaabka lagu dilo dadka hantidooda looga dhacay Mogdisho sida guryo iyo wax la mid ah.
Marar badan waxaanu maqalnaa waxaa maanta la dilay xildhibaan hebel iyo waxaa maanta Mogdisho lagu dilay muwaadin Somaliyeed amaba muwadinad Somaliyeed iyadoo idaacadaha Mogdishana warka markey tabinayaan ciwaan uga dhigaan kooxo hubeysan ayaa qof ku dilay xaafad hebel kooxahaasi oo aan heybtooda la garaneyn.
Hadaba xiriir intee la eg ayaa ka dhaxeeya hadba kooxda dadka dilaya iyo kooxaha markaasi hubeysan ee wadanka ka jira sida Ahalusuna, Shabaab, TFGda iyo ciidamo beeleed marba shaatigii la doono loo galiyo oo loogu yeero iney waardiye ka hayaan Suuqyada ganacsiga sida suuqa bakaaro iyo wax la mid ah.
Inkasta oo aan naf go'eeysa la celin karin hadane badanaa dadka ugu badan ee lagu dilo Mogdisho iyo nawaaxigeeda lagumo dilo diin, Gaalnimo iyo wax la mid ah ee waxaa lagu dilaa markii ay Mogdisho tagaan ayaa siyaabo kala duwan dadku u fasirtaan.
Dadka la dilo intooda badan waxaa sabab u ah dadka dad ugu xiga waxaana loo dilaa labo nooc dadka guryahooda la heysto.
Tusaale: hadii qof gurigiisa oo Mogdisaho ku yaala xoog laguheysto oo uu dowlada xil ka qabto waxaa loo dilaa labo nooc.
1- Qabiilkii uu doono haka soo jeedo qofkaasi mar hadii uu xil ka qabto hadba dowlada markaasi jirta marba hadii uu tago Mogdisho waxaa farta ku fiiqa eheladiisa amaba dadka dad ugu xiga xitaa hadii uusan qofkaasi u tagin Mogdisho inuu gurigisa soo ceshto waxaa reerkii deganaa guriga shaqsigaasi loo sheegaya wax qofkaasi naftiisa qatar galin kara sida in la yiraahdo girigaan iskaka baxa ninkii lahaa ayaa yimide kadibna reerkii guriga xooga ku deganaa hadalo aan qurxooneyn looga geeyey ayaa go,anka ugu haboon ee ay qaataan waxuu noqonayaa iney dilaan qofkaasi, sidaasina kuwii qaraabadiisa ahaa ee xilkiisa u cararayey u galaan booskii u ka dhintay amaba ka dhimatay marxuunkaas/marxuumadaasi.
2-Dadka guraha laga heysta intooda badan wadankii oo aysan ka dhacin dib u heshiisiiin rasmi ah oo aysan dowlad ka jirin ayey u heystan in ay hantidooda soo ceshan karaan sidaasina naftooda ku waayaan.
Hadaba xiriir intee la eg ayaa ka dhaxeeya dadka degan guryaha aysan laheyn ee xooga uga jira hadba kooxaha markasi jira raga hogaaminayo sida xiligii qabqablayasha, maxkamadahii amaba Shabaab iyo TFGda raga hogaminaya?
Hadaanse dul mar yar kusameyno intaan ka warqabno xiligii qabqablayasha waxii dhacay waxey noqonayaan i qarso marka la eego xiligii midowka maxkamadaha.
Dhacdadii ugu yaabka iyo tariikhda dheereyd ayaa dhax martay nin gurigiisa xoog lagu deganaa mudane loo sheegayey in ay gurigiisa heysato qof haween ah laakisne qofkaasi haweenka ah looma sheegin magaceeda iyo qabiilkeeda, waxuuna muwaadinkii Somaliyeed markii ay maxkamadaha la wareegeen Mogdisho oo la helay nabadgalyo yar xiriir la soo sameeyey Hasan Daahir Aweys oo uu siweyn u garaneyey dagaaladii ka hor mudane is yaqiineen waxuuna shaqsigii guriga laga heystay yiri maadama hada nabad la helay dad culimo ahne la wareegeen Mogdisho waxaan doonaya in aan dib usoo ceshto gurigeygii oo mudo xoog leyga heystay.
Hasan Daahir Aweys oo ah aabe Somaliyeed oo 70 jir ah isagu iskumaba mashquulin cida guriga dagane waxuu yiri i soo wac malin hebel girigaadii ayaad ika taqaanaaye kadibna maxaa dhacay?
Gudigii waxaaba degan Hasan Daahir Aweys walaashiis ooba caruur ku dhasho 10 sanona wax ijaar ah bixin. kadibna Oday Aweys oo aysan ka muuqan wax ceeb iyo argagax ah arintanina ay agtiisa ka aheyd Normal ayaa waxuu u hadlay sidii ninkii majaajiliistaha ahaa ee reer Masar Caadil Imaam isagoona hadalka ku bilaabay sidan.
Hade gurigii waanu tagnay reerbaa degan mudo marka bal si looga saaro 7 ilaa 10 kun oon ku maslaxeyno hala keeno sidaasina gurigaadii waad ku heleysaa. ninkii oo ka mid ahaa dadka sidaweyn u taageersanaa midawgii maxaakiimta ee wadanka ka curtay 2006kii ayaa yiri ma gurigeyga oo dhawr iyo toban sano xoog lagu heystay baan mar kale dib u iibsanayaa? waxaana ugu danbeyn loogu jawaabay iska sug inta ay dowlad rasmi ah ka imaaneyso.
Sdioo kale qofba gurigiisa ah xoog lagu heysto hadii isagoo dhaawac ah la geeyo Isbitaalka madina qofkaas ha loo duceeyo waayo hogaanka sare ee Isbitaalka Madina iyo qoysaska inta badan degan guryaha aysan laheyn waa qaraabo waxa dhana wey isku xiran yahiin, waxaa kale oo kuwaasi dheer dhawr idaacadood oo si shacabka loo jahwareriyo warbixintooda ugu horeysa yiraahda kooxo hubeysan oo aan heybtooda la garaneyn ayaa nin amaba haween ku dilay meel hebel waxaa laga yaaba kuwii dilay in laga diray xarunta idaacadaasi.
Marka waxaan dadka guryahooda looga heysto Mogdisho iyo nawaaxigeeda lagula talinayaa in aysan hantidooda raadsan inta ay wadanka ka dahceyso dib u heshiisiin rasmi ah oo ay Somaliweyn iska cafinayaan.
· admin on November 10 2011 12:32:59 · 0 Comments · 1780 Reads ·
14,633,235 unique visits